आज (असोज २५)को राशिफलः कस्तो रहला तपाईंको शेयर बजार, व्यापार, व्यवसाय ?| Corporate Nepal
असोज २५, २०७८ सोमबार ०५:५०
आज २०७८ साल आश्विन महिनाको २५ गते सोमबार, आश्विन शुक्लपक्षको पञ्चमी तिथि, उप्रान्त षष्ठी तिथि । आज नवरात्रअन्तर्गत षष्ठी तिथि भएकाले विल्व निमन्त्रण गर्ने दिन तथा पचली भैरवयात्रा गरिने दिन ।
यात्रारत हुनु पर्ने छ । पारिवारिक जीवनमा सुमधुरता छाउने छ । पेशागत क्षेत्रमा सन्तोषजनक उन्नति, प्रगति हुने छ । साथै आफू पनि पेशाप्रति केन्द्रीत हुने स्वाभावको हुने छ । बोलीमा भने कडापना देखा पर्ने हुँदा विचार पु¥याउनु होला । शेयर क्षेत्र सकारात्मक रहने छ ।
पेशागत भूमिकाको कदर हुनेछ । पेशागत जीवनबाट लाभ मिल्ने छ । मिष्ठान्न भोजनको अवसर जुट्ने छ । भित्रि निर्णय क्षमतामा गिरावट आउने छ । मनमा दुविधाका क्रम पनि कायम नै रहने छ । रिस नियन्त्रणमा ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ । शेयर क्षेत्र अनुकुल रहने छ ।
भाग्यको साथ रहेको छ । मिठो बोली हुने छ । धन सम्पत्तिमा बृद्धि हुने छ भने पेशागत जीवनमा भने केही चुनौतिको सामना गर्नु पर्ने छ । सन्तानप्रति वा सन्तानका बारेमा समर्पित हुन मन लाग्ने छ । बाठो खालको व्यक्तित्व हुने छ । शेयर क्षेत्र धेरै औसत खालको रहने छ ।
मनोबलमा कमि आउने छ । पेशागत जीवनमा चुनौतिसँग जुध्नु पर्ने हुन्छ । खर्चको मात्रामा बढोत्तरी भए अनुसार आम्दानी नबढ्दा दबाब सृजना हुने छ । परिवारका सदस्यहरुले साथ दिने भएकाले कठिन घडिमा जुध्न मद्धत मिल्ने छ । शेयर क्षेत्र सकारात्मक बन्ने छैन् ।
प्रतिष्पर्धात्मक स्वाभाव हुने छ । पेशागत जीवनमा धेरै सोच विचार गरेर मात्र पाइला चाल्नु पर्ने समय सक्रिय छ । आम्दानीको हकमा भने केही बृद्धि हुन जानेछ भने आम्दानी बढाउन बोली प्रभावले साथ दिने छ । यात्राको अवसर मिल्ने छ । शेयर क्षेत्र अनुकुल रहने छ ।
पेशागत जीवन स्थिर खालको हुने छ । आम्दानीमा बृद्धि हुने छ भने पैतृक सम्पत्तिबाट पनि लाभ मिल्ने छ । परिवारप्रति केन्द्रीत हुन मन लाग्ने छ । आफ्ना सपना, लक्ष्य तथा प्राप्ति परिवारप्रति समर्पित गराउन मन लाग्ने छ । बोलीमा नरमपना खालको हुने छ । शेयर क्षेत्र भने शुभ रहने छैन् ।
भाग्य बलियो रहेको छ । शितल प्रकृतिको व्यक्तित्व बन्ने छ । आम्दानीमा केही बृद्धि हुन पुगेता पनि पेशागत जीवनमा अस्थिर हुने छ । बोलीमा कटुताका क्रम आउँदा अरुले त्यति राम्रो मान्ने छैनन् । शेयर क्षेत्र औसत खालको हुने छ ।
बोलीका कारण कामहरु बिग्रने छन् । मनमा उदासिनताले सताउने छ । नकारात्मक विचार र धारणालाई नियन्त्रित गर्न हरदम प्रयास गर्नुहोला । यात्रामा कठिनाई उत्पन्न हुने छ । पेशागत जीवनमा स्थिरता रहने छ भने आम्दानीमा निरन्तरता पनि रहने छ । शेयर क्षेत्र अनुकुल रहने छैन् ।
पेशागत जीवनमा उतारचढाव आउने छ । आम्दानीमा पनि चुनौति देखिन्छ । कठिन क्षणमा पनि निरन्तर उभिने व्यक्तित्व भने हुने छ । धेरै जोखिम भन्दा औसतको यात्रा नै यतिखेर उत्तम हुने देखिन्छ । जीवनसाथिको साथले गर्दा आँट र भरोसा आउने छ । शेयर क्षेत्र चुनौतिपूर्ण देखिन्छ ।
सहयोगी र सामाजिक व्यक्तित्व हुने छ । तर व्यक्तित्वमा कडापना पनि उत्तिकै हुने हुनाले गरेका कामको उचित कदर कम नै पाइने छ । जीवनसाथिको साथ र सहयोगले पेशागत जीवनमा ठुलो मद्धत मिल्ने छ । साझेदारीमा गरिएका कामहरुमा गम्भीर खालका समस्या देखा पर्ने छन् । शेयर क्षेत्र भने सकारात्मक रहनेछ ।
भाग्यको साथ रहेकाले अरुले सकारात्मक मूल्यांकन गर्ने छन् । पारीवारिक जीवनमा पनि उचित कदर हुने छ । बौद्धिक व्यक्तित्व बन्दा बन्दै पनि अलि अव्यवहारिकपना आउने भएकाले यसबारेमा ध्यान दिनु होला । पेशागत जीवन औसत रहने छ । शेयर क्षेत्र औसत रहने छ ।
स–साना उल्झनका कारण समय खेर जाने छ । भाग्यहिनताको अनुमूतिले निरन्तर पछ्याउने छ । पारिवारिक द्वन्दका कारण भेटघाटहरु नमिठा बन्ने छन् । मनमा अशान्तिले सताउने छ । पेशागत जीवन भने औसत खालको रहने छ । आम्दानीमा गिरावट आउने छैन् । शेयर क्षेत्र औसत रहने छ ।
आज (माघ ६)को राशिफलः कस्तो रहला तपाईंको शेयर कारोबार, पेशा, व्यवसाय ?
आज (माघ ५)को राशिफलः कस्तो रहला तपाईंको पेशा, व्यवसाय, शेयर कारोबार ?
आज (माघ ४)को राशिफलः कस्तो रहला तपाईंको आर्थिक कारोबार ?